Huawei na-ahụ ahịa ya na Spen amaala plumet | Gam akporosis
Ahịa Huawei dị na Spain amalitela ịta ahụhụ
Nsonaazụ nke agbapụ na gam akporo anaghị echere Huawei. Mgbe ekwuputara na Sọnde na ụlọ ọrụ na-agba ọsọ nke gam akporo na ekwentị ya, nsogbu ndị a na-arịwanye elu maka ndị na-emepụta China. Mkpebi nke meworo ka enwere ọtụtụ obi abụọ na ndị ọrụ, ndị na-amaghị nke ọma ihe ga-eme na ekwentị ha, ọ bụ ezie na enweela ụfọdụ akụkụ ndị ekwenyela.
Ọnọdụ a na-amanye ụlọ ọrụ iji sistemụ arụmọrụ ya, ha nwere olile anya ibilite ma na agbapu n’ọdida. Ma ugbu a, Ahịa Huawei na Spain malitere ịchọpụta ọnọdụ ọjọọ a na nchegbu ndị ahịa. N'ihi na enwere ndị data na-echegbu onwe ha.
Ọbụghị na Spen ka achọpụtara ka ahịa Huawei si na-ada, ebe ọ bụ ihe doro anya na ọkwa European. Agbanyeghị na nke a bụ obere nchekasị, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na Europe, ya na ahia ahia 20%. N'ihe banyere Spain, ọdịda ahụ na-amalite na-echegbu onwe ya na mmalite nke izu ahụ, dịka isi mmalite dị na mpaghara ahụ ekwuolarị.
Na Spain, ahịa nwere ike ịdị n'etiti 70 na 80%, dị ka akụkọ dị iche iche si kọọ. Ọnụ ọgụgụ ndị a ga-ezo aka na ekwentị ndị ọrụ na-ere. Ọ bụ ezie na ekwentị ndị na-enweghị ego na ụlọ ahịa na-arịba ama ọnọdụ a nke edoghị anya banyere ndị nrụpụta China. Ọtụtụ ụlọ ahịa na-ama ọkwa obere ije na mbido izu a. Ihe ka malitere ugbu a.
Lọ ahịa dị ka El Corte Inglés na-atụ aro nke ahụ Ahịa ekwentị Huawei adaalarịrị 70% n'izu a, jiri ya tụnyere izu gara aga. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-aga ụlọ ahịa na-ezere igwe nke akara ndị China, n'ihi ejighị n'aka eme ihe ga-eme na ọnwa ndị na-abịanụ, ma ọ bụrụ na ha agaghị emesị nwee ike iji gam akporo. Ya mere ndị na-azụ ahịa na-akụ nzọ na ịzụta ekwentị site na ụdị ndị ọzọ, nke ha maara agaghị enwe nsogbu ndị dị otú ahụ. Yabụ ndị asọmpi gị na-erite uru.
Nke a bụ ihe malitere na mgbakwunye, ya mere ọdịda a nwere ike ịdị ukwuu karịa ka izu na-aga. Ozi ọjọọ maka onye nrụpụta, onye bidoro afọ ahụ n'ụzọ kachasị mma, site na mmụba a ma ama na ahịa na nso nso Samsung na uwa ahia. Ugbu a, Huawei na-ahụ ahịa ya dara ada na Europe n'ozuzu ya ma anyị amaghị ogologo oge ọnọdụ a ga-adịgide.
Storeslọ ahịa ndị dị ka Amazon na-ahụkwa ọdịda a na ahịa. Na mgbakwunye, na nke ha ha na-ekwu na nloghachi nke ekwentị Huawei nke azụrụ n'oge na-adịbeghị anya abawanyela. N'ezie, n’ime otu ụbọchị, akagbuola ihe ruru puku iwu iri nke ekwentị ndị China na websaịtị a ma ama. Yabụ nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa abụrụla ozugbo na nke a. Na nnukwu mfu nke nke a nwere ike iche na onye mepụtara ya. N’ihi ya, nsogbu gị anaghị akwụsị ito.
Maka ugbu a, anyị na-ahụ nke na-ewe ọnwa atọ maka Huawei. N'oge a, a na-atụ anya ka ọ dokwuo anya karị ụzọ ọ ga-esi rụọ ọrụ n'ime oge. Ya mere na ndị ọrụ nwere ekwentị site na ika, ma ọ bụ site na Honor, mara ihe na-echere ha n'akụkụ a. Na mgbakwunye inwe ike ịmata ka sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ maka ekwentị ha na ndakọrịta na ngwa. Okwu nke na-eweta obi abụọ n’etiti ndị ọrụ.
Ọzọkwa, O nwekwara ike ịbụ na China na United States na-eme nkwekọrịta n’oge a. Kedu ihe nwere ike ime ka ọnọdụ a ghara ime, na - eme ka ekwentị ndị nrụpụta ka ọ nọgide na - eji gam akporo na ngwa Google ọ bụla. Anyị na-ele anya ịhụ ihe ga-eme na nke a. Kedu ihe ị chere ga-eme? You nwere ike ịzụta ekwentị Huawei ugbu a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ahịa Huawei dị na Spain amalitela ịta ahụhụ
[Vidiyo] Otu esi eji Galaxy S10 + wireless wireless
Huawei Nova 5 na-enweta asambodo 3C na ụgwọ ngwa ngwa 40-watt